Taizhou Kechang Plastic Industry Co., Ltd. kukuba imveliso yobungcali kunye nenkampani yokulungisa iimveliso zeplastiki, iibhotile zeplastiki, iibhotile zezithambiso, iibhotile zemichiza zemihla ngemihla, iibhokisi zeplastiki, iblastikhi yeplastikhi, inkxaso yeblastikhi yeplastikhi, izembozo zeplastiki kunye nezinye iimveliso, kunye nenkqubo epheleleyo kunye nesayensi yolawulo lomgangatho. Taizhou Kechang Plastic Industry Co., Ltd. amandla ingqibelelo kunye nomgangatho imveliso iye yamkelwa kolu shishino.
Inkampani yethu iqokelele inani elikhulu lophando lobunzululwazi obuphezulu kunye nabasebenzi bolawulo, yakhe ulabhoratri osebenza ngokupheleleyo wokuvavanya. Ngophuhliso loqoqosho lwentengiso, ngenxa yeemveliso ezikumgangatho ophezulu, inkonzo ebalaseleyo kunye negama elihle, samkelwa kakuhle ngabathengi.
"Umgangatho, uMthengi kuqala, igama, ukusebenzisana ngokunyanisekileyo"
Inkampani imisele inkqubo yenethiwekhi yasekhaya neyamazwe aphesheya, yazinzisa iqela lokuthengisa lobuchwephesha ekhaya nakumazwe aphesheya, yavula iimarike zasekhaya nezangaphandle, kwaye inamaqabane amaninzi eYurophu, eMelika naseAsia ukwandisa ishishini.
Iimveliso zethu & Oomatshini
Kule minyaka mibini idlulileyo, inkampani ityale imali eninzi ukwenza utshintsho olukhulu kwezobuchwephesha. Isakhiwo sefektri siyilelwe kwaye sakhiwa ngokungqinelana neemfuno ze-GMP zikarhulumente zokutya kunye nolawulo lweziyobisi kwimveliso yeziyobisi, kwaye umasifundisane wemveliso ufikelele kumgangatho wamashishini wamayeza wamazwe aphesheya kwibanga le-10,000 kunye nebanga le-100,000 lokuhlanjululwa kwendalo.
Kwaye ukwaziswa ngenaliti yasekhaya yokubetha umngxuma umatshini wokubumba kunye nomatshini wokubumba inaliti kunye nomatshini wokufaka iplastiki ngokuzenzekelayo, umatshini weqokobhe we-suppository kunye nezinye izixhobo zemveliso, kunye ne-infrared, i-ultraviolet spectrophotometry, uhlalutyo lwe-elektroniki lokulingana ukulingana kwezixhobo eziphezulu zokufumanisa.
I-Taizhou Kechang Plastic Industry Co., Ltd. inikwe isatifikethi sobhaliso lwezixhobo zokupakisha ezixuba amayeza kunye nezikhongozeli ngurhulumente ngokutya kunye nolawulo lweziyobisi.
Inokuvelisa izinto eziphezulu zokupakisha zonyango kunye neenkonkxa zeentlobo ezahlukeneyo kunye neemilo
ukutya okutsha kunye neenkonkxa zokupakisha izithambiso
ezahlukahlukeneyo zeplastiki ngqo iinaliti
Inkampani izimisele ekupakisheni izithambiso kunye nokusetyenziswa kwishishini lokupakisha iibhotile imihla ngemihla ukwandisa, inamava emveliso etyebileyo kunye netekhnoloji efanelekileyo yobugcisa, okwangoku ngemfuno yabathengi ikwanika unyango olukhethekileyo, inqanaba lokoneliseka kwabathengi.
Inkampani yethu iqokelele inani elikhulu lophando lobunzululwazi obuphezulu kunye nabasebenzi bolawulo, yakhe ulabhoratri osebenza ngokupheleleyo wokuvavanya. Ngophuhliso loqoqosho lwentengiso, ngenxa yeemveliso ezikumgangatho ophezulu, inkonzo ebalaseleyo kunye negama elihle, samkelwa kakuhle ngabathengi. Inkampani imisele inkqubo yenethiwekhi yasekhaya neyamazwe aphesheya, yazinzisa iqela lokuthengisa lobuchwephesha ekhaya nakumazwe aphesheya, yavula iimarike zasekhaya nezangaphandle, kwaye inamaqabane amaninzi eYurophu, eMelika naseAsia ukwandisa ishishini. Okwangoku, ukuze kuphuhliswe iimarike zaphesheya, inkampani iya kunika abathengi baphesheya unyango olukhethekileyo kunye noncedo, ngokufudumeleyo samkele uninzi lwabathengi baphesheya ukuba beze kudibana.
Ulawulo lwemveliso engqongqo, izixhobo eziphambili kunye netekhnoloji, umgangatho wemveliso, imbeko yesivumelwano kunye nokuthembeka, uninzi lwabathengi bathembekile kwaye bamkelekile, zonke iintlobo zeemveliso zithengiswa ekhaya nakumazwe aphesheya, wamkela ngokufudumeleyo abathengi abatsha nabadala ekhaya nakumazwe aphesheya ukuze bathethathethane ishishini.
Intshayelelo kwimbali yophuhliso lwenkampani
Ikhulu lamawaka eworkshop yokuhlanjululwa
Seka isebe lokuhlola ubulunga benkampani ukuba lenze uhlolo lomgangatho wezityalo kwibhetshi nganye yeemveliso zefektri.
Yongeza imigca emi-5 yokufutha kwebhotile
Beka kwizixhobo zeblister, cwangcisa umasifundisane weblister.
Icandelo isebe yorhwebo lwangaphandle, ukuphuhlisa urhwebo lwangaphandle.
Ubume benkampani buhlengahlengiswe kakhulu. Iinkxaso-mali kunye namasebe amaninzi asekiwe.
Kuthunyelwe kumazwe amaninzi kwaye kwasekwa inkqubo yorhwebo lwangaphandle oluzinzileyo.